Ma isbadal siyaasadeed baa ka soo fool leh deegaanka Soomaalida Itoobiya? - BBC News Somali
Arrimahaas ayaa dabo socday isbadal siyaasadeed oo wayn oo dhawaan ka dhacay dalka Itoobiya ka dib markii uu xilka iska casilay ra'iisulwasaarihii hore Hailemariam Desalegn, isaga oo arrintaas ku macneeyay in uu waddada u xaarayo in isbaddallo dhab ah ay ka dhacaan dalka Itoobiya, isla markaasna la dhagaysto dalabka shacabka.
Masuul Hay'adda Xuquuqda Insaanka Itoobiya ka tirsan oo Jigjiga lagu jir dilay
Waxaa magaalada Jigjiga lagu jir dilay masuulkii hay'adda Xuquuqda Aadanaha Itoobiya u qaabilsanaa Dawlad Deegaanka Soomaalida Itoobiya Jamaal Maxamed Warfaa.
Balse Demisew Benti oo warfaafinta u qaabilsan Hay'adda Xuquuqda Aadanaha ee Itoobiya ayaa BBC u xaqiijiyay in la jir dilay Jamaal wuxuuna intaas ku daray in la diray guddi xaqiiqo raadin ah.
Xigashada Sawirka, Jamal Maxamed/FACEBOOK
Jamaal Maxamed Warfaa oo deeganka Soomaalida Itoobiya u qaabilsan Hay'adda Xuquuqda Aadanaha Itoobiya
"Waa run Jamaal oo ah masuulkii hay'adda u qaabilsanaa Deegaanka Soomaalida ayaa Jigjiga lagu jirdilay, yaa jirdilay, maxaa loo jirdilay, sidayse arrintaasi u dhacday waa arrin qayb ka ah baaritaanka aan wadno ayuu yiri".
Hay'adaha xuquuqda aadanaha u dooda ee caalamiga ah ayaa marar badan laamaha ammaanka ee dawlad deegaanka Soomaalida ku dhaliilay in ay tacadiyo gaystaan.
Dareen ka dhashay gabadh meydkeeda laga heley Qabridahare
Demisew Betni oo hay'adda xuquuqda aadanaha ee Itoobiya u qaabilsan warfaafinta ayaa sheegay in dhacdadan iyo kuwo kalaba la soo gaarsiiyay hay'adda ayna baaritaanno ku hayso.
Magaalada Qabri-daharre oo amniga ay la wareegeen ciidammada Federaalku
Odayaas ayaa sheegay in ay cabashadooda gaarsiiyeen Hay'adda xuquuqda Aadanaha ee Itoobiya, isla markaasna ay la kulmeen xeer ilaaliyaha guud ee faderaalka iyo masuuliyiin kale oo heer faderaal ah.
"Anagoon diyaarsanayn ayuu damcay in uu nala kulmo ra'iisulwasaaruhu, waxaana codsanay in aan soo diyaargarawno oo cabashadanada markaas u gudbino" ayuu yiri mid ka mid ah odayada.
Markii dhawaan la doortay ra'iisulwasaaraha cusub ee Itoobiya Abiy Axmed wuxuu sheegay in shacabka la dhagaysan doono isla markaana uu la hadli doono dhammaan mucaaradka iyo dadka dhaliishan.
Kooxihii fursaddaas ka faa'iidaystayna waxaa ka mid noqday dadkii ku kacsanaa xukuumadda Jigjiga.